Farshaxanka Fiican wuxuu ka kooban yahay shan farsamooyin: Qoob ka ciyaarka, Fanka Warbaahinta, Muusikada, Farshaxanka Muuqaalka, iyo Tiyaatarka. Waxaan aaminsanahay in waxbarashada hodanka ku ah farshaxanka ay gabi ahaanba udub dhexaad u tahay horumarka qof sifiican u xeel dheer, oo aan fahano saamaynta togan ee waxbarashada farshaxannimadu ku keento barashada ardayda.
Ardayda dugsiga dhexe waxay ka dhex dooran karaan kooxda muusikada, muusiga iyo heesaha waxbarashadooda muusigga sidoo kale waxay kaqeyb qaadan karaan koorsooyinka farshaxanka muuqaalka iyo warbaahinta. Ardaydu waxay sidoo kale kaqeyb qaadan karaan muusikada manhajka, tiyaatarka, qoob ka ciyaarka iyo nashaadaadka farshaxanka ee laga heli karo heerka dhismaha.
Ka baro waxbadan oo ku saabsan heerarka gobolka ee Farshaxanka Fiican barta internetka ee Waaxda Waxbarashada ee Minnesota.
Ardayda dugsiga dhexe waxay leeyihiin fursad ay ku dhageystaan Band-All-District Band. Tababbarro ayaa la sameeyaa toddobaadle inta lagu jiro sannad-dugsiyeedka, dugsiga ka dib mid ka mid ah dugsiyadeenna dhexe. Dhaqan ahaan, Kooxda Degmada oo dhan waxay soo bandhigaan riwaayad dayr ah, riwaayad fasax ah oo bisha Diseembar ah oo lagu qabto Mall of America Rotunda, booqasho guga oo lagu tago dugsi sare iyo Jaamacadda Betel iyo bandhig bandhigga guga oo ay la socdaan kooxo kale oo muusiko ah.
Dhageysiga ayaa caadi ahaan la qabtaa xilliga guga.
Ardayda doonaya inay kaqeybqaataan khibrad orkurera ah oo dhib badan, All-Degmada Orchestra waxaa heli kara iyadoo la dhageysanayo ardayda fasalka 6-aad ee degmada. Ardaydu waxay kaqeyb qaadanayeen Kooxda All-District Orchestra in kabadan 35 sano. Tababbarro ayaa lagu qabtaa dugsiga ka dib mid ka mid ah dugsiyadeenna dhexe.
Ardayda dhigata fasalka 7-aad iyo 8-aad waxay fursad u leeyihiin inay ku dhegeystaan Maamuusta Kooxda Maamuusta. Tababbarro ayaa lagu qabtaa dugsiga ka dib mid ka mid ah dugsiyadeenna sare. Iskuduwaha ayaa lagu celceliyaa sanad dugsiyeedka oo dhan. Waxqabadka waxaa ka mid ah riwaayad jiilaal ah oo lala galayo Kooxda All-District Orchestra, riwaayad guga, booqasho dugsi dhexe iyo fadhi duubis ah. Baaritaanku wuxuu dhacayaa guga ardayduna waxay helayaan ogeysiis labadii toddobaad ee ugu dambeysay dugsiga
Kooxda Maamuusta ee Maamuusta waxay ka bilaabatay degmada 1997 koox-kooxeed muusig keliya. Sannadkii 2004, waxay noqotay koox muusig oo dhammaystiran taas oo macnaheedu yahay inay ka mid yihiin qalabka muusikada, qoryaha loo yaqaan 'woodwinds', naxaas iyo qalabka durbaanka lagu garaaco.